Sidee dawladnimo ku waartaa Q:3aad- “Dhaqaale loo simmanyahay” (WQ: Xasan C. Shire) | Hangool News
Sidee dawladnimo ku waartaa Q:3aad- “Dhaqaale loo simmanyahay” (WQ: Xasan C. Shire)
January 16, 2019 - Written by Hangool News 1
Dadku wa in ay awoodaan inay galaan kana qaybgalaan suuqyada sida shaqaalaha, macaamiisha iyo milkiilayaasha ganacsiga.
Hufnaan ku wareegsan iyo aqoon guud ee xeerarka iyo caadooyinka wa in ay dadka u oggolaanayaan inay bilaabaan ganacsi, shaqo raadsadaan, ama ku biiraan suuqyada.
Tiknoolajiyada ayaa si ballaaran loo qaybiyey waxayna kor u qaadeysaa fayoobida shakhsiga iyo bulshada lagu na ogaankaro dhaqdhaqaaqa fursadaha sida dunnida kale.
Haddaba, helitaanka dhaqaale dadku u simmanyahay waxa lagu karaa in ay jiraan qodabadan;
1. Sinnaanta – Fursado badan ayaa loo heli karaa dhammaa muwaadiniinta an kala soocalahayn si kor loogu qaado dhaqdhaqaaqa dad badan e nololeed loona yareeyo durrufaha lamidka ah marka aan dawladnimo jirin ama kala takoorku xooganyahah iyo muudsi kooxo-gaar ah.
Dhammaan qeybaha bulshada, gaar ahaan kuwa saboolka ah ama kuwa bulsho ahaanta liita, wa in ay awoodaan inay ka faa’iidaystaan ​​fursadahaas. Sinnaanta ayaa hoos u dhacaysa halkii ay sii kordhin lahayd muddo daawladnimadu taaba-gasho haddaan la abuurin shuruuc sidaas u qeexaysa iyo dad ka madaxbannaan koxaysi oo dhisa qarannimo ku taagan dhidibba adag.
Dadku waxay leeyihiin xuquuq siman oo ku salaysan aasaas dhaqaale, oo ay ku jirto helitaanka sinnaan ee alaabta dadweynaha, adeegyada iyo kaabayaasha, sida gaadiidka dadweynaha, waxbarashada, hawada nadiifka ah iyo biyaha.
2. Koboca – Dhaqaale ayaa sii kordhaya dhanka ganacsiga xorta ah e alaabooyinka iyo adeegyada ku filan si loo helo faa’iido ballaaran oo ku salaysan fayoobida iyo fursadda weyn. Shaqo wanaagsan iyo fursado shaqo ayaa sii kordhaya, dakhliguna way sii kordhinayaan, gaar ahaan kuwa saboolka ah marka la taabagaliyo nidaamka daawladnimada e ku dhisan xeeldheeri qalabaysan oo qiimaysan si’an lahayn isbarbaryaac. Nidaamyada dhaqaale waxay u badalaan sidii loo hagaajin lahaa dhammaan dadka iyo noolaha kale e u baahan in ay quud iyo cabitaan ama hadh iyo hawo nadiif ah helaan, tan ugu muhiimsanna wa in ay ku jiraan beelaha saboolka ah iyo kuwa laga reebay. Koboca dhaqaalaha iyo isbeddelka kuma koobna oo keliya qiyaasta walxaha dhaqaalaha (sida GDP), laakiin waa in lagu daraa oo lagu qiyaasaa natiijooyinka kale ee qabsada guud ahaan wanaagga iyo koboca dhaqaalaha sida in la helo maamulwanaag abuura dhaqaale wacan.
3. Xasillooni – Shakhsiyaadka, bulshooyinka, ganacsatada iyo dawladaha wa in ay haystaan ​​kalsooni ku filan mustaqbalkooda iyo karti-u-kordhin si ay u saadaaliyaan natiijada go’aamadooda dhaqaale. Shakhsiyaadka, qoysaska, beelaha iyo ganacsatada wa in ay ku fillaadaan inay maalgashadaan mustaqbalkooda. Nidaamyada dhaqaale ayaa sii kordhaya marka ay adkeeyaan shoogga iyo walwalka, gaar ahaan khalkhalka saameynta aan ku habboonayn ee bulshooyinka saboolka ah ama kuwa nugul. Sidaas ba laga rabaa waddankasta oo raba inuu kobco.
3. Waaridnimo – Xoolo dhaqaale iyo bulsho ayaa si joogta ah u wada socota, taas oo ilaalinaysa fayoobaanta isdhexgalka. Hantida dhaqaale iyo bulsheed waa hantida bulsho ee dhammaan hantida gaarka ah ee gacan ka geysanaya fayo-qabka aadanaha, oo ay ku jiraan dad soo saarey (la soo saaray, maaliyad, dad, bulsho) iyo hanti dabiici ah oo kayd galikarta Marka laga hadlayo raasamaalka dabiiciga ah, isticmaalka bani’aadamku waa inuu ilaaliyaa ama soo celiyaa awooda dabiiciga ah ee soo saarida nidaamka deegaanka ee alaabooyinka iyo adeegyada ee gacan ka geysanaya wanaagga aadanaha.
Dhammaan go’aan fulinta ee dhaqan-dhaqaale waa in ay ku jirtaa kharashka iyo faa’iidooyinka muddada fog, oo ma ahan oo kaliya guulaha gaaban in laga fikiro ee isticmaalka aadanaha ee saldhigeena hantida guud ama saldhiga hantida shaqsinnimo.
La soco qaaybta 5aad………..
Xasan C Shire